Babanjiwe ‘abaqola abantu ku-OLX, bethi badayisa izimoto’ – LIVE Express
Babanjiwe ‘abaqola abantu ku-OLX, bethi badayisa izimoto’
Abalisa abane abasolwa ngokuba ngongqondongqondo ekuqolweni kwabantu izizimbulu zemali bebakhohlisa ngokuthi badayisa izimoto kuma-website, bakhalelwe ngamasango kaSigonyela, e-Orlando, e-Gauteng.
Mhlaziyi-6 ku-May 2016, umlisa oneminyaka engama-46 ubudala wavula icala lokukhwabanisa esiteshini samaphoyisa e-Winterton.
Lo mlisa uthi wabona isikhangiso kwi-website okudayiswa kuyo izinto esezisebenzile (second hand), i-OLX. Kulesi sikhangiso kwakukhangiswe ngemoto yohlobo lwe-Ford Bantam LDV, nokwakuthiwa iyadayiswa.
Wabe esephendula kulesi sikhangiso nalapho axhumana nomuntu owazibiza ngo-Collin. Kusolwa ukuthi u-‘Collin’ watshela lo mlisa ukuthi baningi abantu abafuna ukuthenga le moto wabe esemcela ukuba akhokhe i-deposit.
u-‘Collin’ wanika lo mlisa i-account number amyalela ukuba afake kuyo imali. Le-account number ibizwa ngokuthi yi-“Elite Cars Sale”.
Lo mlisa wabe esefaka imali engango-R15 000 kule account, esebenzisa uhlelo lwe-Electronic Fund Transfer (EFT).
Wathi uma esiyifakile wabe esexhumana naye u-‘Collin’ nowabe esemtshela ukuthi imali ayiveli kwi-account ngakho lo mlisa kuzomele akhokhe enye futhi imali ngokwe-cash deposit kwenye i-account igama layo i-“A. Plaatjie Trading”.
Nangempela lo mlisa wabe esefaka imali engango-R10 000 kule-account.
Emva kwalokho wabe esenikela e-Delmas ukuyolanda imoto yakhe kanti akazi ukuthi uzohlangana nezimbila zithutha.
Esefikile kule ndawo wabheka cishe yonke indawo ibhizinisi elibizwa ngokuthi yi-“Elite Cars Sales” kodwa awangalithola.
Emva kwalokho wabe esexhumana no-‘Collin’ kodwa wayengasatholakali. Yilapho lo mlisa afunda kwezakhe ukuthi bekuyi-scam noma uqoliwe.
Mhla ziyi-12 ku-May 2016, ngosizo lwebhange, amaphoyisa ase-Orlando abopha umsolwa wokuqala emva kokuthi ezame ukukhipha imali eyayifakwe kwi-account.
Kwaphinde kwaboshwa abanye abasolwa ababili ngamaphoyisa ase-Winterton ngokusebenzisana nawase-Orlando.
Amaphoyisa aphinde abophe omunye umlisa khona e-Gauteng nokusolakala ukuthi uyena umholi noma ohamba phambili kulobu bugebengu bokukhwabanisa.
Ngenkathi eboshwa amaphoyisa athola inqwaba yamakhadi asemabhange, ama-cellphone kanye nama-sim card, nokusolakala ukuthi yikho obekusetshenziswa ukwenza ubugebengu.
Abasolwa babhekene namacala okukhwabanisa kanti basagcinwe esitokisini emva kokuvela kafushane eNkantolo yeMatshi e-Weenen.